Claude Bernard University Lyon 1 - Study eFransi, iYurophu
Claude Bernard University Lyon 1 iinkcukacha
isixeko : Lyon
isifinyezo : UCBL
abafundi (nama.) : 35000
Musa ukulibala ukuba discuss Claude Bernard University Lyon 1
Claude Bernard Lyon 1 yiYunivesithi elinika ukufundisa ngenxa 40,000 abafundi ngonyaka kwiinkalo inzululwazi nobugcisa, ezempilo kunye nemidlalo. Claude Bernard Lyon 1 is part of Université de Lyon, isiza University French ibalulekileyo ngaphandle kummandla Paris.
Ekubeni laseka igama ngamandla yobukrelekrele eFransi ehlabathini lonke, Claude Bernard Lyon 1 University umana edudulela imida yolwazi,ekukhuthazeni imfundo ngophando nokukhuthaza rhoqo ingxoxo phakathi ezenzululwazi noluntu.
Claude Bernard Lyon 1 na iYunivesithi baphila ngokupheleleyo. neekhampasi, ibekwe intliziyo ummandla obalaseleyo, ziindawo eliphilileyo nentabalala lwemisebenzi, evumela abafundi ukuba ukuphuhlisa ukufikelela nemvo ukuzanelisa. KwiYunivesithi Lyon 1 ekummandla 13 kwiindawo ezahlukeneyo ezine kumaziko eyintloko umsebenzi kwingingqi Rhône-Alpes of France : emizini Lyon, Saint-Etienne and Bourg-en-Bresse kunye kwidolophu Roanne. IYunivesithi kakhulu igalelo kuphuhliso kulo mmandla kubanjisenwe yayo iinkampani zasekuhlaleni kazwelonke kunye namagunya engingqi.
Lyon 1 iqeshe 2900 Utitshala / abaphandi kunye nootitshala, ngokuba 700 Kwakhona abasebenzi esibhedlele kwakunye kwabasebenzi abanobugcisa kunye olawulo 1800. Lyon 1 waba kwisiseko ozilawulayo ngomhla woku-1 kuJanuwari 2009 kunye mali zizonke 405 m € Lyon 1 yenye abaqeshi inkulu kwezi ngingqi.
Dyunivesithi ezishushu, kunye nezifundo ezihambelana neemfuno zoluntu
abemi umfundi Lyon 1 kukuba phantse 40.000. 54% le abemi yimazi kwaye 18% kufumana isibonelelo yomfundi. Lyon 1 Kwakhona nebhongo ukubala inani elikhulu labafundi abavela (10,5% abafundi yayo, ye 134 beentlanga).
phantse 80% labafundi akhetha kwiinkqubo zoqeqeshelo : Lyon 1 uvelisa hayi ngaphantsi 9250 izidanga ngonyaka.
Iinkqubo zokufunda kwi woyibingelela lani inzululwazi yezempilo ukunika ukufikelela athotywe neengcali zonyango (ugqirha wamayeza, unokhemesti, ugqirha wamazinyo, umbelekisi) yobizo paramedical (audioprosthesist, ergotherapist, umzimba, owayendifundisa ukuthetha, orthoptist, umzimba ezizodwa kwi ukudityaniswa psychomotor).
kwicandelo inzululwazi Lyon 1 ka-ikwanikezela ukhetho amaninzi izifundo: yidiploma Lệ ibonelela uqeqesho 17 iinkalo nemachule abaphathi zobugcisa elizayo. 57 degrees umsebenzi sedigri ukulungiselela abafundi imisebenzi zolawulo eziphakathi. 111 degrees yenkosi (yobugcisa, reasearch okanye umsebenzi edityanisiweyo reasearch) ukulungiselela abafundi imisebenzi zokuphatha eziphezulu okanye umsebenzi wophando kunye nophuhliso. Lyon 1 ikwanikezela umgangatho ophezulu kakhulu uqeqesho olulodwa vocational kubunjineli (Polytech Lyon) nenzululwazi ngokwezibalo (Isfara).
L'ESPE, ukusekwa uqeqesho lootitshala ezikhethekileyo kumalungiselelo vocational lootitshala zaseprayimari nezasesekondari (zonke izifundo).
Lyon 1 amabhaso 300 doctorates ngonyaka kubafundi ngeziphumo zophando lwabo resarch, kuqhutywa kwiilebhu yeYunivesithi, ngokusebenzisana kunye namashishini iqabane okanye ezinye iindawo zemfundo.
Kwakunye nokubonelela lokuqala inkqubo izifundo zesidanga ngokubanzi, Lyon 1 akhaphe abafundi ezimeleyo okanye inkampani exhaswa ukuzingisa uqeqesho nophuhliso lobungcali.
Ukhuthazo akhutheleyo ezintsha
Lyon 1 yiYunivesithi eyahlukeneyo begxininisa kwi kokubini angundoqo zophando olusetyenziswayo kwaye njengoko enjalo oko kuqhayisa ngaphezu 4415 amanqaku epapashwe ngamazwe kunye 44 awodwa ngonyaka. KwiYunivesithi 68 iiyunithi uphando lukarhulumente-mali esebenza kwiinkalo ezintathu; impilo, okusingqongileyo kunye nezinto zobugcisa. Inani elithile kwezi yunithi ziziphumo umbutho iilebhu eziliqela ngokwamaqela uphando. Oku kunceda aba lequmrhu ukuba intsimi banzi kakhulu izakhono kunye nokufikelela, okanye ukuthenga, izixhobo zophando yokusebenza ngaphezulu kunokuba bekuya kuba kunokwenzeka njengoko izakhiwo ngamnye.
kwishishini abancedisa icandelo labucala yeYunivesithi, EZUS Lyon1 kunye Lyon Engineering Project (LIP) ukunceda iilebhu Lyon 1 ukuya ukuphendula ngempumelelo iifoni tender zophando izivumelwano yesizwe neyamazwe ngamazwe.
Kuzwelonke nakumazwe wavuma
IYunivesithi izimisele ukuba ngaphezu 80 iiprojekthi European Union inxaxheba ngokukhutheleyo The Seventh Framework Nkqubo yoPhuhliso loPhando yeTeknoloji (FP7).
Iwonga ngezizwe Lyon 1 njengeziko yokugqwesa uphando isandula wabonisa:
ngayo ukuxhaswa ngemali kwiDyunivesithi abenikwe-Arhente yeSizwe yoPhando,
nxaxheba yeYunivesithi kwi yemixholo Network for Advanced Research wabiza Innovations zothomalaliso kunye Infectiology,
kwakunye Centres yemixholo for Research and Healthcare: Neurocap (lokufumanisa), Centaure (ilungu zezintso) kwaye Cancer Synergie Lyon
kwaye leInstitut CarnotI @ L: izithuthi kunye lenzululwazi.
Yongeza kule 6 zophando iiKlasta ngokwemihlaba zeesayenzi zezempilo (Lyonbiopole), zinembono (Minalogic), chemistry kunye nokusingqongileyo (axelera), plasturgy (Plastipolis), nokwaluka (Techtera), umdlalo (Sporaltec) zothutho zikawonke (Lyon Urban yakwaHyunday kunye neebhasi 2015).
Uyafuna discuss Claude Bernard University Lyon 1 ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Claude Bernard University Lyon 1 kwi Map
iifoto: Claude Bernard University Lyon 1 ezisemthethweni kwiFacebook
Claude Bernard University Lyon 1 ncomo